Jeografia - Jeôgrafia, Laharam-pehintany, Italia, faritra ar
Endrika ampiasaina aminny jeografia
Repoblika Tiorka ani Kiprosy
ⓘ Jeografia - Jeôgrafia, Laharam-pehintany, Italia, faritra ara-jeografia, Isam-ponina, Ganà, Amerika, Normandia, Fangitra ara-jeografia, Mponina, Libàna Atsimo ..
Endrika ampiasaina aminny jeografia Firenena Hefaka Jeografian Eoropa Jeografiani Madagasikara Kontinenta Nosy Ranomasimbe Ranomasina Renirano Tany Tanàna Tendrombohitra
I Ôseania dia fitambarani Aostralia sy ny nosy anarivony maro manodidina ao aminny faritra atsimonny ranomasimbe Pasifika. Ahitana firenena miisa 14 ny ao Ôseania. Manana velarana 8 523 655 km2 eo ny kontinentani Ôseania. Ny 90% nizay dia Aostralia. Izy no kontinenta kely indrindra eto an-tany.
Ny laharam-pehintany na laharam-pehy dia fangitra ara-jeografia manome ny fahavaratana na ny fahatsimoana eo aminny velaranny tany, fajiry na velarana mitelorefy. Ny laharam-pehintany faha-0 dia ny fehibe ary ny laharam-pehintany faha-90 dia ny Tendrontany Avaratra na atsimo. Miaraka ampiasaina aminny laharan-jara hasina ny laharam-pehintany hahafantarana tsaratsara kokoa ny misy ny toerana iray eo aminny Tany. Tsy ny Tany ihany no ampiasana ny laharam-pehy na zana-pehy fa ny Volana sy ny planeta na fajiry ary ny bolan-danitra koa.
I Italia dia faritra ara-jeografia ao Eorôpa Atsimo izay manana velarana 324 000 km 2, voafaritry ny tandavan-tendrombohitra Alpa ao avaratra andrefana sy ao avaratra, ary ny Ranomasina Mediteranea no manodidina ny sisa rehetra. Mifanandrify aminny taninireto firenena sy fanjakana ireto ny faritra ara-jeografiani Italia: i Italia, i San Marino, i Vatikàna, i Mônakô, i Malta. Manampy azy ireo ny ampahanny kôntinenta ao avaratra sy ny ampahany aminny saikanosy ao afovoany ary ny faritra misy nosy ao atsimo sy ao andrefana. Eo anelanelanny Saikanosy Iberika sy ny Saikanosy Balkanika no misy a ...
Ny isanny mponina dia ny fitambaranny isanny olona Miaina ao aminny faritany iray. Mahazo alalana ofisialy miaina eo aminny faritany iray. Ny olana mahakasika ny isanny mponina dia dinihanny demografia na siansa mahakasika ny mponina. Dinihana aminny sôsiôlojia, aminny ekonomia ary aminny jeografia ny fihetsiky ny olombelona. Matetika ampiasaina aminny marketing ny tahirin-kevitra demografika. Taminny 2006, ny fiitatry ny isanny mponina erakizao tontolo izao dia 1.14% monja.
Ny Ganà na Repoblikani Ganà dia firenena any Afrika andrefana ao aminny faritry ny Helodranoni Ginea. Ny firenena manodidina azy dia Kôtidivoara any andrefana, i Borkina Fasô any avaratra ary ny Tôgô any atsinanana. Ny renivohiny dia ny tanàni Accra ary Ganeana no anaranny mponina ao aminy. Firenena mpikambana ao amini CEDEAO i Ganà. Ny teny ofisialy dia fiteny anglisy, ny teny ampiasainny be sy ny maro dia ny fiteny twi ary ny sandam-bola dia ny cédi. Tsy misy fifandraisana ara-jeografia na ara-tantara aminny Empirani Gana i Ganà ankehitriny. I Ganà ankehitriny, Côte-de-lOr taloha, dia no ...
I Amerika dia anisanny kaontinenta dimy, ny ranomasina mamaritra azy dia ny ranomasimbe Pasifika any andrefany, ny ranomasimbe Atlantika any atsinanany, ny ranomasimbe Arktika any avarany ary ny ranomasimbe Atsimo any atsimony. Ny faritany tena misongadina dia i Amerika Avaratra sy i Amerika Atsimo. Ireo faritra roa ireo dia voasaraky ny andilan-tanini Panama. Aminny lafiny ara-jeografia, ny velarantaniny dia 42 tapitrisa km 2 ary ny isanny mponina dia 930 tapitrisa eo ho eo araka ny fanakekezana natao taminny taona 2009.
I Normandia dia faritra ara-jeografia sy ara-kolontsaina any Frantsa, ao avaratra andrefani Frantsa, faritanny ranomasina Manche. Ankehitriny dia mahafaoka nandrify aminny fari-piadidianny Basse-Normandie sy i Haute-Normandia.
Ny fangitra ara-jeografia dia ny fangitra amantarana ny teboka eto aminny Tany na ny Volana na ny planeta na ny bolan-danitra na zavatra hafa misy ny toerana iray, ka miisa telo ireo fangitra ireo, dia ny laharam-pehy sy ny laharan-jara hasina ary ny haavon-toerana. Matetika dia ampy ny roa voalohany hamantarana ny misy ny toerana iray eto amboninny Tany, izay mety ho tanàna na faritra na zavatra hafa.
Aminny lafinny statistika, ny mponina dia vahoaka na olona miaina ao aminny toerana iray voafaritra. Ny isam-ponina dia isanny olona misy ao aminny faritra iray taminny fotoana iray. Ny demografia dia ny fandinihana ara-tstatistikanny isam-ponina. Ny fihetsiky ny mponina dia dinihana aminny atao hoe siansa ara-tsosialy, aminny toe-karena ary aminny jeografia, jeografianny mponina marimarina kokoa. Ny fandinihana ny mponina dia voazakanny lalànny vina.
I Libàna Atsimo na Libanona Atsimo dia faritra ara-jeografia ao Libàna izay mivelatra hatrany aminny sisin-tany israeliana any atsimo ka hatrany aminny renirano Awali ao avaratra sy fefenny sisintany siriana avy ao atsinanana. Raha ara-panjakana izany rehetra izany dia ahitana governorata libaney roa: ny governoratanny Atsimo sy ny governoratani Nabatiyeh.
Ny laharan-jara hasina dia fangitra ara-jeografia maneho ny refin-joro atsinanana-andrefana aminny teboka aminny Tany na ny Volana na ny planeta na ny bolan-danitra na zavatra hafa. Tsipika aneritreritra mampitohyny tendro atsimo sy ny tendro avaratra ny laharan-jara hasina fa tsy zavatra hita maso na azo tsapain-tanana. Ny laharan-jara hasina iaingana eto aminny Tany dia ny ani Greenwich.
Ambatoharanana (Anosibe Anala)
Ambatoharanana dia tanàna sy kaominina any Madagasikara ao aminny Faritra Alaotra-Mangoro, distrikani Anosibe Anala ao aminny faritani Toamasina.
Anosibe Anala dia tanàna sy kaominina any Madagasikara ao aminny Faritra Alaotra-Mangoro, distrikani Anosibe Anala ao aminny faritani Toamasina.
Ny Asaoro dia tamba-nosy portogey 1 500km mianadrefana avy ao Lisboa, ary 3 900km mianatsinanana avy aminny amorontsiraka ny Amerika Avatra. Faritany mizaka tena amini Portogaly ny tambanosini Asaoro.
De l’importance des liens géographie physique/géographie humaine pour comprendre les risques de submersion des deltas surpeuplés article de ce numéro par Sylvie Fanchette, géographe à lInstitut de recherche pour le développement Menaces sur les deltas numéro 121 de la revue Hérodote
Ny nosy dia tany kely na antonontonony hodidinin-drano tanteraka. Mety ho ranomasina na farihy na rano mandeha io rano manodidina azy io ary mety maharitra izany fisianny rano manodidina izany na tsia. Raha maromaro mifanakaiky sy mifaneritery izy dia atao hoe tamba-nosy.